U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 26aad - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 26aad
U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 26aad
August 3, 2018 admin1477
Muno, dhowr bilood bay reerkoodii kasii maqantahay. Si kasta ooy guriga Fatxi ugu qanacsantahay, Yuusuf wehelkiisana ay u haysato, hadana reerkooda ka maqnaanshahooda iyo waalidkeed ka war la’aan toodu waxay ku tahay nabar markii ay xasuusataba damqa.
Dadaalkii iyo silicii ay soo martay ma doonayso in ay noqdaan hal bacaad lagu lisay, sidaas darteed, dhowr jeer ooy damacday in ay reerkii wacdo bay is qabatay, iskuna qancisay in ay mar dhibkaan ka bixi doonto, inta danteeda ay gaaraysana looga baahanyahay in ay samirto.
sidii ay u timid xaafadda Taleex, saaxiibteed Mulki xitaa ma aysan wicin, oo meesha ay joogto, Yuusuf maahane, qof kale kuma aaminayso in ay u sheegto. waa ogtahay in ay iyada iyo Mulki sidaan ku kala dhiman karaan, oo waxay ku talo jirtaa in ay Mulki qanciso markii ay xoriyadeeda dib u hesho.
“Yuusuf”, “Yuusuf”, buu gadaashiisa ka maqlay Yuusuf oo inta iskuulkii kasoo baxay, qoraxdoo aad u kulul, gurigoodii oo u muuqda, si dadaal ah ugu sii socda.
Wiil yar oo toban iyo agaheeda jira baa ka daba ordaya oo u dhawaaqaya. Yuusuf oo inta istaagay, wiilkii yaraa eegaya baa garanweysan wiilka ka daba qeylinaya. “Hee maxaa jira?” buu Yuusuf wiilkii yaraa weydiiyay.
“Ninka tukaanka baa ku wacaya” buu wiilkii yaraa ku jawaabay. Yuusuf “ninka tukaanka” markuu maqlayba wuxuu ka shallaayay sababta uu wiilka ugu istaagay, ee uusan gurigooda u gelin. Inta soo kala jiireeyay buu u yimid ninkii tukaanka oo siduu Yuusuf moodayay aanan xanaaqsanayn. “Yuusuf haye seetahay? Meeshii goormaan kaa sugaa?” buu yiri isagoo koob shaah ah, ee uu tukaanka banaankiisa la taaganyahay, kabkabanaya.
Yuusuf, oo ninka qoraxda kulul, shaaha qaacaya cabaya la yaaban, baa inta isna dhoola cadays aanan meel jirin iska baaray yiri, “waan kuu maqanahay, anigaa war kusoo siinaya dhawaan insha Allaah”, oo inta wax yar sheeko camiraad u badnayd ku maaweeliyay gurigoodii iska soo aaday.
Yuusuf lacagtii uu Muno ugu adeegay baa laga doonayaa. In uu Barre ka doono buu rabay, laakiin Muno oonan diyaar ahayn daraadeed buu Barre xiriirkiisa ka caga jiidayay. Wuxuu goostay in uu galabta Muno waco oo uu u sheego in uu Barre aadayo, si uu lacagta uga soo qaado. Wuxuu kaloo is leeyahay fasax ka qaado Muno si uu Barre ugu sheego halka ay joogto.
“Naa heedhe caruurta habaarka ka daa” buu Cali hadba Muraayo ku leeyahay iyadoo caruurta kii qeyliyaba cay iyo habaar isugu daraysa. Waxay dhibsanaysaa inta ay Cali taleefanka kula sheekaysanayso in laga qaso.
Waxa kaliya uu Cali dhibsado baa ah, marka uu Muraayo taleefanka usoo diro, caruurta uu isagu kontanka ku qayaasayo, ee agteeda sida qaska la moodo uga dhawaaqa sidii in ay ka xunyihiin in ay ka mashquusho.
“Caliyoow war ma haysid! Ma ogtahay in Ree Xiirane ay weli Muno u baadi goobayaan sidoodii? Wallaahi waan ka yaabay, dad quusanayaba ma ahan” bay Muraayo Cali ku wargelisay oo isagu markaan is lahaa Ree Xiirane haddii intaan laga maqnaa malaha waa sabri doonaan, hadeerse warkaan loo sheegay aad uga niyad jabay.
Cali isagu dhowr jeer buu Yuusuf kula taliyay in uu gabadha toos u doonto, laakiin Yuusuf baa aabihiis aad uga baqaya, afkiisana “gabar ha la iidoono” aanan soo marsiin karin.
Yuusuf aabihiis aad buu u jecelyahay. Waa wiil dhan kasta uu ka eegaba uu aad ugu faraxsanyahay qofka uu kusoo baxay.
Yuusuf marka laga soo tago isagu in uu waxbarashada jecelyahay, bay hadana ka dhaadhacsantahay in laga filanayo in uu waxbarto. Filashadaas baad moodaa in ay waxbarashadiisa iyo hormarkiisa hogaanka u hayso.
Dhalinyaro saaxiibadiis ah oo waxbarashada ka haray ama ka seeseegaya markuu arko, lama yaabo in aysan waxbarashada jeclayn kaliya, ee wuxuu kaloo la yaabaa sida ay waalidkood u hortagi doonaan oo ugu sheegi doonaan in ay waxbarashadii ka hareen.
Yuusuf isagoo xaalkiisu sidaas yahay baysan kaba suuroobin in uu inta aabihiis u tago u sheego in gabar loo doono, waayo guur iyo waxbarasho in aysan isku meel gelin buuba aaminsanyahay.
Muraayo sheeko dheer kadib markii ay rabtay in ay taleefanka isi saarto, bay Cali u sheegtay in uu Yuusuf ku wergeliyo in Muno weli la raadinayo si uu isku ilaaliyo. Muraayo markii ay Cali macsalaamaysay, bay iyadoon taleefankii isi saarin cunug inta ay wax u dirsatay, isagoon u keenin, oo iska ag socda aragtay, kab kala daba oroday. Calina markuu cabaar Muraayo reerkeeda buuqooda dhagaystay buu taleefankii isi saaray isagoo si jacayl ku jiro u leh “waa naag waalan”.
Yuusuf oo labisan baa inta barandadooda soo dhex istaagay u dhawaaqay walaalkiis Hanad. Galabtoo kale Yuusuf wuxuu ku qoranyahay in uu Hanad dhowr daqiiqo leyliga iskuulka uu ka caawiyo. Isagoo dherersanaya buu inta oto oteeyay albaabkii ka degay. Cabaar markuu jidkii sii socday buu soo xasuustay in uusan Muno wicin, oo soo kala jiireeyay.
Intuusan albaabkoodii soo galin buu Cabdulle, odaga deriska ahi, joojiyay. Yuusuf oo aad u neceb odagaan sheekadiisa baa isku dayay in uu been inta u sheego ka fara baxsado. Cabdulle se sheeko aad moodo in ay horay ugu diyaarsanayd buu dabada is qabtay. Isagoo sheekaba sheekay dhashaadiisii lagu yiqiinay dhexda kaga jira buu Yuusuf inta “adeer raali noqo, meel baan ka degdegsanahay” yiri odagii oo weli hadlaya ka dhaqaaqay.
“Muno Cadeey ii waran macaanto?” buu ku salaamay. “Fiican macaane, waa see waa adigaan isoo wacaye, in aad ii timaadid ma rabtid miyaa?” bay Muno oo codkeeda niyad jab laga dhedhensanayo ku jawaabtay.
Yuusuf aad buu u necebyahay in uu Muno niyad jebiyo. Markiiba waxaa qabatay in uu u tago, hadana inta is celiyay buu u sheegay in uu rabo in uu Xamar Jadiid inta aado Barre u tago, weydiiyayna in ay ogoshahay in waalidkeed u usoo sheego halka ay joogto.
Muno waa rabi lahayd in waalidkeed loosoo sheego, si welwelku uga baxo, malahana ay u soo booqdaan, laakiin wax ay ku jawaabto, iyo talada roon ma garanayso.
“Adiga maxaad ku talin lahayd?” bay kusoo su’aal celisay. Yuusuf oo ka caga jiidaya in isaga masuuliyadaan madaxa laga saaro, baa ku taliyay in reerka loo sheego in gabadhu fiicantahay marka hore, haddii laga arko in aysan dhib keeni doonina, loo sheego meesha ay joogto si ay usoo fiiriyaan.
Muno waa ka aqbashay, oo hoos ka ducaysatay in uusan waalidkeed xanaaq kala soo kulmin.
Yuusuf lacagta tukaanka looga leeyahay buu rabaa in uu Barre kasoo qaado maadaama meel uu isagu ka keeni karo aysan jirin. Laakiin markuu tukaankii Barre dhex istaagay buu is ceebsaday warkiisiina gadaal u laqay. “Anigaa dhiibaya meeshaan doonaba aan ka keenee” buu uurka iska yiri, salaantiisii iyo kaftankii isaga iyo Barre ka dhaxeeyayna iska sii dhex galay.
“Munaa kusoo salaamaysay” buu Yuusuf isagoon laga filanayn yiri. Barre oo sidii laga filanayay aanan wax dareen ah, naxdin ama farxad midna muujin, baa ku jawaabay “siday ahayd?”.
“Oo kaalay, walaashaa oodan dhowr bilood arag ama maqal baan salaan kaaga keenay, adna maba kala jeclid waa sidee?” buu Yuusuf oo yaabani su’aalay.
“Saaxiib qoftaas waa inkaarantahay, warkeedana ma rabo. Naagta waalidkeed oo waayeel ah, sonkor iyo dhiig karna qaba, inta dhuumatay aanan xitaa in ay nabad qabto soo sheegin, ma aqaano sabab aan salaanteeda ugu farxo” buu ku jawaabay Barre oo burkiisa iska miisanaya, oodna moodo in uu Muno waa hore ka samray.
“Rabi baa mahadleh, aanan lacagtii warkeeda iga yeersiin” buu Yuusuf oo nefis dareemaya isku sheegay, hoosna ka yiri “anna in aan lacag ay gabadhoodu isticmaashay kasoo qaado baan rabay, oo waxaan is lahaa, warkeeda waa ku farxi doonaa, isna wuuba ka samray”.
Yuusuf oo meel uu war u dhigo weysan baa cabaar feker la aamusay. Barrena markii Muno hadalkeeda lasoo qaaday wixii ka danbeeyay wajigiisa murugo baa fuushay.
In waalidka uu ka waraysto buu damcay Barre, hadana sidii uu su’aasha u dhigi lahaa buu soo qaban waayay. Cabaar markii uu aamusnaa buu yiri “Barroow waad ogtahay in aysan sahlanayn arintaan meel kasta oo laga eegaba. Waad ogtahay Ree Xiirane sida ay gabadha u raadinayeen. Aad xanaaqdide waxaad ii sheegtaa sida kale oo ay ku badbaadi lahayd? Waad ogtahay haddii waalidka loo sheegi lahaa meesha ay joogtay waa u tagi lahaayeen, Xiiranana inta ka daba dhuunto buu halka ay joogto ugu tagi lahaa”.
“Aniga maxay iigu soo sheegi weysay in ay nabad qabto, anigaa hooyo iyo aabe u sheegi lahaa in ay caafimaad qabtee anoo halka ay joogto aanan sheegayn” buu Barre si caro leh, laakiin aanan qaylo ahayn u yiri.
Yuusuf taas jawaab waa u waayay, wuxuu goostay in uu mowduuca badalo, laakiin hadal kale in la galo aad bay u adkaatay. Cabaar markay hadana isla joogeen iyagoo kala aamusan, buu Yuusuf yiri “hadeer maxaan yeelnaa, gabalku intuusan iga dhicin baan laaban lahaaye?”.
Barre intuusan afkiisa weli furin buu inta garabka Yuusuf soo qabtay, oo soo kaxeeyay, fadhiisiyay biibitada Mako ee tukaankiisa ku dhagan, laba koob oo shaah ahna dalbay.
Yuusuf markuu wax yar heesta, Jamaad, ee Cumar Nuur Cabdulle, oo tukaankii Mako ka daaran la qaadayo, buu isha ku dhuftay Barre oo indhaha ku gubaya, lana yaaban damanaantiisa. Yuusuf markiiba inta is ceebsaday buu aamusay, hadana isku difaacay “Barroow ma heestaan oo daaran baa laga aamusi karaa?”.
Barre inta warka Yuusuf ee heesta ku saabsan is moogaysiiyay buu yiri “Hooyo iyo aabe anigaa caawa markaan guriga tago u sheegi doona in ay Muno nabad qabto, kadibna sida ay yeelaan baan arki doonnaa. Hadeer meesha ay gabadhu joogto ha ii sheegin, anigaa kusoo wici doona, oo wixii akhbaar ah kusoo siin doona”.
“Waa talo fiican” buu Yuusuf ku jawaabay.
Sheekadii markii ay qabowday, Barrena u ekaaday Barrehiisii hore, is macsalaamayn kadibna Yuusuf uu laamiga cagta sii saarayo, oo xaafadoodii uu kusii jeedo, buu damcay in uu hadana lacagtii Barre weydiiyo, hadana “mayee iga dhaaf” inta si qofkii agtaagani uu u maqlayo u yiri, socodkiisii iska sii watay.
Barre tukaankii inta iska kala gabagabeeyay, oo dhowr qofood oo saf ugu jirtay u boobsiiyay waxay rabeen, buu gurigoodii dhankiisii afka saaray.
Wuu ogyahay in hooyo iyo aabe ay labaduba guruga joogaan, oo waayahaan socodkoodu wa yaraa, laakiin wuxuu aad u rabi lahaa in odagu uusan deydka fadhin. Wuxuu doorbidayaa in uu hooyo marka hore u sheego, kadibna ay labadoodu odaga ugu wada sheegaan, si qof uu ku qeyliyo uu u garan waayo.
Muna aabaheed Jaamac Sandhool waa nin degan, oo aad u carab gaaban. Laakiin Muno arinteeda baa waayahaan qeylo aanan dabeecad u ahayn ku kasabtay in uu lahaado.
Arinta Muno caloolyow bay ku haysaa. Gabdhaha deriska mid ka mid ah markuu arko Muno bay soo xasuusiyaan markaas buu wajigiisu is bedelaa. Sheekada odayaasha xaafadda wuu iska yareeyay cabsi uu ka qabo in Muno lagu soo hadal qaado. Dadka qaar ee hadalkoodu badanyahayna wajiga buu ka dadbaa. Muno sidii in ay inta halawday suuqa gashay buu u qalbi jabanyahay.
Jaamac Sandhool oo inta gudaha kasoo baxay deydka soo istaagay iyo Barre oo albaabka kasoo galay baa isku soo beegmay. Barre naxdin buu la luxmay, oo odaga taagan markuu arkay ee soo eegaya, buu is yiri malaha adiguu ku sugayay. Odaguna wiilka xiligaan socda yaabkiisa buu la eegayaa.
Barre wax salaan u eg markuu si gunuunac ah u yiri, buu inta gudbay qolkiisii iska sii aaday. Madaxa waa siin waayay in uu Muno soo hadal qaado. Wuxuu ku fekeray in uu sugo inta qoraxdu ka dhacayso si uu odaga mugdiga ugu gaado.
In cabaar ah markuu qolkiisii ku jiray, buu banaanka usoo baxay mar inta maqribkii la tukaday hooyo iyo aabe ay salli banaanka yaalla ku wardinayaan.
“Hooyo, aabe see la yahay?” buu ku furfurtay. “Waan fiicannahaye maxaa cusub?” bay hooyo Cibaado dhuunkaal ugu jawaabtay. Aabe Jaamac Sandhool oo dareensan in galabta ay wax jiraan baa inta dafay hadalkii yiri “soo tuf waxa aad galabtoo dhan la riimayso?”.
Barre wuu dareemay in hadal looga fadhiyo, si uu ku baxsadaana aysan jirin. Mar uu cabaar aanan badnayn isagoo aamusan uu meelaha fiir fiiriyay buu yiri “Muno baan fariin idinkaga wadaa. Way fiicantahay, magaalada bayna dhinac ka joogtaa”.
Intaas markii ay Barre afkiisa ka dhacday, buu Jaamac Sandhool inta intaagay yiri “hadeer igee meesha ay joogto” isagoo xanaaqa haya si muuqata u dhididaya.
“Wallaahi aabe ma aqaan halka ay joogto, intaas kaliya baa la ii sheegay. Insha Allah anigaa war kugu soo celin doona” buu Barre si boobsiis ah, misana aad u dabacsan, u yiri si uu odaga u dajiyo.
“Hadeer wac, oo aniga ila hadalsii ciddii kuu sheegtay, iyagaan u baahanahaye” buu hadal kusoo koobay, oo taleefankiina doonay.
Barre wuxuu sameeyo buu garan weysanyahay. Wuxuu ogyahay hadduu Yuusuf odagu waco, uusan been sheegi doonin, Munana isla caawaba lasoo heli doono.
Isagoo ka caga jiidaya, buu dhowr jeer markii uu lambar qaldan galiyay, Yuusuf toos u wacay, hoosna ka ducaystay.
Yuusuf oo markuu Xamar Jadiib kasoo laabtay gurigooda toos u yimid baa taleefanka reerka ag taagan. Laba jeer markuu dhacay buu eegay. Lambarkii guriga Ree Jaamac Sandhool buu isha ku dhuftay. Lambarkaan Muno kaliya baa kasoo wici jirtay, oo Barre isagu tukaankiisa buu kasoo wacaa markuu Yuusuf u baahdo.
“Muno guriga ma joogtee, yaa kaloo lambarkaas iga soo wici kara?” buu hoos iska weydiiyay. “Hah! Alla waa odagii iyo habartii” buu lasoo booday oo taleefankii oo dhacaya inta iska ag istaagay bilaabay in uu ku dul fekero.
Halmar, baa waxaa u sawirantay iyadoo inta Muno loo tago, lasoo wadayo. Xanaaq isaga loo qabo darteedna gabadha loo diidayo.
Isagoo weli riyo maalmeedkiisii isaga jira buu taleefankii mar kale soo dhacay, wuu eegay, waa lambarkii Ree Jaamac Sandhool oo hadana soo wactamaya.
LA SOCO QEYBTA 27AAD
Xaqiiq: Safarkii Khayre ee Puntland oo Fashil kusoo dhamanaya
Wasaaradda Waxbarashada Galmudug oo hakisay Wadashaqeyntii Wasaaradda Waxbarashada Federaalka